Accueil > Gazetin'ny nosy > Governoran’i Betsiboka : diso fanantenana ny vahoaka
Governoran’i Betsiboka : diso fanantenana ny vahoaka
Very fanahy mbola velona ny vahoakan’i Betsiboka. Raha tsiahivina dia nandritra ny filankevitry ny minisitra farany tamin’ny herinandro lasa teo no voatendry ho governoran’ny Faritr’i Betsiboka i Jean Roger Randrianjafinindrina. Roa taona mahery no niandrasan’ny mponina any an-toerana ny governorany, saingy tsy araka ny niheritreretana azy ny zava-niseho. Olona tena vonona hiasa ary mitovy fijery amin’ny filoham-pirenena no nandrasan’ny vahoakan’i Betsiboka, indrisy anefa fa mifanohitra amin’izany masotsivana takian’ny vahoaka izany ity governora vaovao ity.
Tsara marihana fa tsy olom-baovao any Betsiboka mihintsy ingahy Jean Roger fa efa lehiben’ny faritra tamin’ny andron’ny Tetezamita, ary efa depioten’ny distrikan’i Tsaratanana ihany koa. Efa fantatry ny mponina any an-toerana tsara ny fitondran-tena sy ny toetran’io governora vaovao io. Fanararaotam-pahefana, fitiavam-bola tafahoatra, fanaovana ampihimamba sy tantely afa-drakotra ny harena ao amin’ny faritra, ireo no santionany amin’ny antony tsy hankasitrahan’ny vahoakan’i Betsiboka ny governora Jean Roger. Efa hita izany tamin’ny fotoana na lehiben’ny faritra sy solombavam-bahoaka azy. Ankaotra izay, tsy dia mahay mifandray amin’ireo olom-boafidy sy olom-boatendry any an-toerana ihany koa ny tenany.
Tsy vitan’izay ihany voasaringotra tamina raharaha fanodikodinana fiara 4×4 sy vola an-jatony tapitrisa maro teo anivon’ny faritra koa i Jean Roger tany aloha tany. Manoloana izany rehetra izany dia manaitra ny filoham-pirenena ny vahoakan’i Betsiboka mba hanolo ity governora vao notendrena ity, indrindra fa ireo mpanara-dia ny filoha hatramin’izay. Maro amin’ny zanaky ny faritra hoy izy ireo no manam-pahaizana sy traikefa, afaka mitantana tsara ny faritra.